မြန်မာဖောင့် ဒဒွေးရိုက်မရတဲ့ပြဿ နာ ဖြေရှင်းဖို့
ဒါလေးကမသိသေးသူတွေ ဒုက္ခမရောက်ရလေအောင်ပါ သူကလွယ်လွယ်လေးနဲ့တိုင်ပတ်တတ်တယ် ဒီလိုတစ်ခါလုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ
File Menu - Preferences - more သို့သွားပါ
more preferences အောက်တွင် Use Typographer's quote ကို uncheck လုပ်ပေးပါ
File Menu - Options - Proofing Tab မှ Auto Correct Option box လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
အဲ့ဒီထဲက Tabတွေအားလုံးရဲ့အောက်က boxလေးတွေမှာ Uncheck လိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါ
Posted by Pai Khant at 12:58 AM No comments:
Recycler virus သတ်ဖို့ကုဒ်လေးတွေပါ
အောက်ပါကုဒ်များအား notepad တွင်ကော်ပီကူးလိုက်ပါ
save လျှင် All files နှင့် .bat extension နှင့် save လိုက်ပါ ပြီးလျှင် run ပါ
Taskkill /F /IM Recycler.exe /im uninstx.exe /im FDD23C.exe /im 59ef4c.exe
Taskkill /F /IM 7EB74E.EXE /im 3fcfba.exe /im 74F7CA.EXE
msg * Please Wait…
attrib -a -r -s -h %systemroot%\_AUTORUN.INF
attrib -a -r -s -h %systemroot%\_confi.exe
attrib -a -r -s -h %systemroot%\_Config.ini
attrib -a -r -s -h %systemroot%\_Recycler.exe
attrib -a -r -s -h %systemroot%\_uninstx.exe
attrib -a -r -s -h %systemroot%\_keyvect.dll
attrib -a -r -s -h %systemroot%\_netscv.exe
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_4D51C1\_74F7CA.EXE
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_2ff48c\_59ef4c.exe
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_9b023b\_3fcfba.exe
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_65B3DF\_FDD23C.EXE
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_7681CF\_7EB74E.EXE
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_4D51C1
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_2ff48c
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_9b023b
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_65B3DF
attrib -a -r -h -s %systemroot%\_system32\_7681CF
attrib -a -r -h -s “%systemroot%\_system32\_4D51C1\_*.*”
attrib -a -r -h -s “%systemroot%\_system32\_2ff48c\_*.*”
attrib -a -r -h -s “%systemroot%\_system32\_9b023b\_*.*”
attrib -a -r -h -s “%systemroot%\_system32\_65B3DF\_*.*”
attrib -a -r -h -s “%systemroot%\_system32\_7681CF\_*.*”
del “%systemroot%\_system32\_4D51C1\_*.*” /a /f /q
del “%systemroot%\_system32\_2ff48c\_*.*” /a /f /q
del “%systemroot%\_system32\_9b023b\_*.*” /a /f /q
del “%systemroot%\_system32\_65B3DF\_*.*” /a /f /q
del “%systemroot%\_system32\_7681CF\_*.*” /a /f /q
reg delete HKLM\_software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v 74F7CA /f
reg delete HKLM\_software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v 59ef4c /f
reg delete HKLM\_software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v 3fcfba /f
reg delete HKLM\_software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v FDD23C /f
reg delete HKLM\_software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v 7EB74E /f
DEL “%systemdrive%\_Documents and Settings\_Administrator\_Start Menu\_Programs\_Startup\_iiiiii.lnk” /a /f /q
DEL “%systemdrive%\_Documents and Settings\_Administrator\_Start Menu\_Programs\_Startup\_74F7CA.lnk” /a /f /q
DEL “%systemdrive%\_Documents and Settings\_Administrator\_Start Menu\_Programs\_Startup\_59ef4c.lnk” /a /f /q
DEL “%systemdrive%\_Documents and Settings\_Administrator\_Start Menu\_Programs\_Startup\_9b023b.lnk” /a /f /q
DEL “%systemdrive%\_Documents and Settings\_Administrator\_Start Menu\_Programs\_Startup\_FDD23C.lnk” /a /f /q
DEL “%systemdrive%\_Documents and Settings\_Administrator\_Start Menu\_Programs\_Startup\_7EB74E.lnk” /a /f /q
DEL “%userprofile%\_Start Menu\_Programs\_Startup\_iiiiii.lnk” /a /f /q
DEL “%userprofile%\_Start Menu\_Programs\_Startup\_74F7CA.lnk” /a /f /q
DEL “%userprofile%\_Start Menu\_Programs\_Startup\_59ef4c.lnk” /a /f /q
DEL “%userprofile%\_Start Menu\_Programs\_Startup\_9b023b.lnk” /a /f /q
DEL “%userprofile%\_Start Menu\_Programs\_Startup\_FDD23C.lnk” /a /f /q
DEL “%userprofile%\_Start Menu\_Programs\_Startup\_7EB74E.lnk” /a /f /q
DEL Recycler.exe /a /f /q
attrib -a -r -s -h autorun.inf
DEL autorun.inf /a /f /q
DEL Recycler.exe /a/s/f/q
reg delete HKCU\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_policies\_system /v “disableTaskMgr” /f
reg delete HKCU\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_policies\_system /v “disableRegistryTools” /f
reg delete HKCU\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_policies\_explorer /v “NoFolderOptions” /f
reg delete HKLM\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v “Windows Recycled” /f
reg delete HKCU\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v “uninstx.exe” /f
reg delete HKCU\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v “uninstx” /f
reg delete HKLM\_SOFTWARE\_Microsoft\_NetWorkSetup /v pid /f
reg delete HKLM\_SOFTWARE\_Microsoft\_NetWorkSetup /v hostid /f
REG delete HKLM\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_policies\_system /v “DisableTaskMgr” /f
REG add HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Explorer\_Advanced /v Hidden /t REG_DWORD /d “1? /f
REG add HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Explorer\_Advanced /v SuperHidden /t REG_DWORD /d “1? /f
REG add HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Explorer\_Advanced /v HideFileExt /t REG_DWORD /d “1? /f
REG add “HKLM\_Software\_Microsoft\_Windows NT\_CurrentVersion\_Winlogon” /v system /t reg_sz /d “” /f
REG add “HKLM\_Software\_Microsoft\_Windows NT\_CurrentVersion\_Winlogon” /v Shell /t reg_sz /d “Explorer.exe” /f
Posted by Pai Khant at 4:39 AM No comments:
အင်တာနက် upload speed ကိုမြှင့်ရန်
အင်တာနက် Upload Speed ကို ဒီလိုမြှင့်လိုက်ပါ ( For Windows7& 8 )
အင်တာနက်သုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံးကိစ္စတွေထဲမှာ အင်တာနက် Download Speed ကို ဘယ်လိုမြှင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပေါ့ ..
ဒါပေမယ့် .. အဲဒီလိုလူတွေထဲမှာမှ ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ ဖိုင်လေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်သူတွေနဲ့ Blogger တွေအဖို့ Upload Speed မြင့်ဖို့ကလည်း တော်တော်အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ...
ဒီတော့ .. ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ဒေသမှာနေေ
နရတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ ရှာရင်းဖွေရင်း ကလိရင်းနဲ့ အမှန်တကယ် ထရောက်တဲ့ နည်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ..
ဖိုင်တွေကို Hosting Site တွေမှာ တင်တဲ့အခါ Upload Speed ကို သိသိသာသာမြှင့်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလေးတစ်ခုပါ ..
ကဲ .. အဆင့်နှစ်ဆင့်လုပ်ရမယ့်ထဲက ပထမအဆင့်ကို စပါမယ် .
၀င်းဒိုးကြီးရဲ့ Run Box မှာ gpedit.msc လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ် ဒါမှမဟုတ်လည်း Ok နှိပ်ပါ
အဲဒီထဲက Network ရဲ့ရှေ့က မြှားအဖြူလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ
အဲဒီထဲက Qos packet Schedule ပေါ်မှာနှိပ်ပြီး ဘယ်ဖက်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ထဲက Limit reservable bandwidth ပေါ်မှာ Double Click နှိပ်လိုက်ပါ ၀င်းဒိုးအသစ်တစ်ခု ပွင့်လာပါမယ်
ဒီအဆင့်ပြီးတာနဲ့ စက်ကို Restart ချလိုက်ပါ
ဒုတိယအဆင့်ကို မစတင်ခင်မှာ အင်တာနက်လိုင်းကို အရင်ဆုံးချိတ်လိုက်ပါ
Device Manager ကိုဖွင့်ပါ
အဲဒီထဲမှာ COM 1, COM2 ... စသည်ဖြင့် တွေ့ပါလိမ့်မယ် .. ( အင်တာနက်လိုင်းအမျိုးအစားပေါ်မူ
တည်ပြီး အရေအတွက် မတူပါဘူး )
အဲဒီထဲက တစ်ခုချင်းပေါ်မှာ Double Click နှိပ်လိုက်ရင် ၀င်းဒိုးတစ်ခု ပွင့်လာပါမယ် ..
ပွင့်လာတဲ့ ၀င်းဒိုးထဲက Port Settings ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး Bits per second အကွက်မှာ 128000 ကိုပြောင်းပေးပါ
၀င်းဒိုးပြန်တက်လာတဲ့အခါ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပြီး ဖိုင်တစ်ဖိုင်လောက် Upload တင်ကြည့်လိုက်ပါ
တကယ်ပဲ Upload Speed ဟာ သိသိသာသာမြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ကဲ .. အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ..
Share from www.mmithelper.com
Posted by Pai Khant at 8:34 AM No comments:
Bat ဖိုင်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ Wifi Hotspot လွှင့်တဲ့နည်း လေးပါ.
ကျွန်တော် BAT ဆိုတဲ့ ဂရုလေးထဲကနေ ရထားပါတယ်။ မန်ဘာတွေကိုလည်း
သိစေချင်လို့ပါ.. သူက Bat ဖိုင်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ Wifi Hotspot လွှင့်တဲ့နည်း
လေးပါ... ဘာ Software ကိုမှသုံးစရာမလိုပဲ မိမိကွန်ပျူတာကနေ Wifi Sharing
လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးပါ.. Access Point Name ကိုလည်း မိမိဘာသာ မိမိပြန်ပြင်
ရေးလို့ရသလို Password ကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက် ပြန်ပြင်ရေးလို့ရပါတယ်.......
TITLE BAT GROUP WIFI HOTSPOT SCRIPT :P
ECHO. 1. SHOW WIFI DEVICE (ALLOW OR NOT)
ECHO. 2. CONFIGURE WITH START
ECHO. 3. START WIFI HOTSPOT
ECHO. 4. STOP WIFI HOTSPOT
ECHO. 5. EXIT
SET /p CHOICE=Enter number you want:
if %CHOICE% == 1 GOTO DEVICE
if %CHOICE% ==2GOTO CONFIGURE
if %CHOICE% ==3GOTO START
if %CHOICE% ==4GOTO STOP
if %CHOICE% ==5GOTO EXIT
ECHO. Enter Number Between (1 To 5)
Msg * Please Check your hosted network supported or not. Good Luck!
SET /P varName=Enter Hotspot Name:
SET /P varPassword=Enter Password More than 8 Character:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=%varName% key=%varPassword%
msg * Network Name : %varName% Password : %varPassword%
Posted by Pai Khant at 6:56 PM No comments:
Firefox Browser ရဲ့ speed နဲ့ download speed မြန်အောင်
Firefox ရဲ့ download speed ကို မြှင့်တင်ကြည့်ရအောင်။
Firefox က default အနေနဲ့ dial-up speeds ကို ထားထားတာပါ ။
မိတ်ဆွေဟာ highspeed internet ကိုသုံးနေတာဆိုရင် firefox ရဲ့ setting
အနည်းငယ်ပြောင်းပေးရုံနဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ download speedတော်တော်လေးမြန်လာတာကို
Firefox ရဲ့ number ofconnections ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လဲ မိတ်ဆွေရဲ့ bandwidth
မိတ်ဆွေ ဖိုင် size ကြီးကြီးဒေါင်းလေ သင့်download speed ပိုမြန်လာလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
1) Firefox connection setting ကိုပြောင်းပေးဖို့ about:config ကို
Firefox ရဲ့ address bar မှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
2) "Filter:" bar မှာ persistent ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ
3) အောက်ကအတိုင်း preference names နှစ်ခုကို သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တွဲပြီးမြင်ရပါမယ်
network.http.max-persistent-connections-per-proxy user set interger 8
network.http.max-persistent-connections-per-server user set interger 6
4) အဲဒီ preference name တခုဆီမှာ Double click နှိပ်လိုက်ပါ။ တန်ဖိုးချိန်းပေးဖို့
pop-up window လေးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့
internet connection က cable သို့မဟုတ်
DSL ဆိုရင် 20 နဲ့ 30 ကြားထဲကနံပါတ်တခုခုကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
(ကိုယ့် connection speed ကိုလိုက်ပြီးအဲဒီ အတွင်းမှာ အတိုးအလျှော့လုပ်ကြည့်ပါ။ )
ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
5)Firefox ကို Restart ချလိုက်ပါ။ file တွေပိုများများကို တပြိုင်တည်းdownload
လုပ်လို့ရနိုင်ပြီး download speed လဲ တော်တော်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Credit to http://www.komyatmm.co.cc/2009/06/firefox-download-speed.html
* (၁) Address Bar ထဲမှာ about:config ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Enter ခေါက်ပါ။
* (၂) Filter Search Bar ထဲမှာ Network.http.pipelining ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှာပါ။ Value Field မှာ Double Click ခေါက်ပြီး True အဖြစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပါ။
* (၃) Filter Search Bar ကိုပြန်သွားပါ။ Network.http.pipelining.maxrequests ကို ထပ်ရှာပါ။ ဒီ Option ပေါ်မှာ Double Click ပေးပါ။ တန်ဖိုးကို (8) ပြောင်းပါ။
* (၄)network.http.proxy.pipelining အားထပ်ရှာပါ။ Double Click ပေးပါ။ တန်ဖိုးကို True ပြောင်းပါ။
* (၅)filter Search Bar ထဲမှာ Network.dns.disableipv6 ကိုရှာဖွေပြီး Double Click ပေးခြင်းဖြင့် Value ကို True အဖြစ်ပြောင်းပါ။
* (၆)content Interrupt Parsing
* ဒီနည်းလမ်းကတော့ မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ Application တစ်ခုခုကြောင့် Page Loading ရုတ်တစ်ရက်ရပ်တန့် ခြင်းကို တုန့်ပြန်မှုမှ ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
* - about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမဆို Right Click (apple User များ - Ctrl+click) ပေးပါ။ New မှတစ်ဆင့် Boolean ကို ရွေးပါ။ New Boolean Value Pop-up Window ထဲမှာ Content.interrupt.parsing ကိုတည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ New Boolean အတွက် Value ကို True ကိုရွေးပါ။ Ok ပေးပါ။
* (၇) Page Loading လုပ်နေစဉ်အတွင်း ကြန့်ကြာမှုဖြစ်စေသည့် Rendering လုပ်ခြင်းအား အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ တုံ့ပြန်မှု မဖြစ်စေရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
* - about:config Window အတွင်းမှာပဲ Right Click ထပ်ပေးပါ။ Pop-up Menu မှတဆင့် New ကိုရွေးပါ ၊ ထိုမှတဆင့် Integer ကိုရွေးပါ။
* - New Integer Pop Up Menu အတွင်း Content.max.tokenizing.time ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို 2250000 ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။
* (၈)content Notify Interval
* ဒါကတော့ စာမျက်နှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကူး စောင့်ဆိုင်းချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
* - about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။
* - Content.notify.interval ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။value ကို 750000 <ပေးပါ။ Ok လုပ်ပါ။
* (၉)content Notify Ontimer
* မိမိအသုံးပြုပြီးသား စာမျက်နှာတစ်ခုကို ပြန်ခေါ်ရာမှာ စောင့်ဆိုင်းချိန်နည်းပြီး ပိုမိုသွက်လက်စွာအလုပ်လုပ်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
* - about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Boolean ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.ontimer ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို True ရွေးပြီး Ok ပေးပါ။
* (၁၀)notify Backoffcount
* Timer-based Reflows တွေကို အမြင့်ဆုံး နံပါတ်အထိ ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပါတယ်။
* -about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.backoffcount ကိုရိုက်ပြီး Ok ပေးပါ။ Value ကို5ပေးပြီး Ok လုပ်ပါ။
* (၁၁)content Switch Threshold
* ဒါကတော့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကနေ ဒေတာတွေကို အလွဲအပြောင်းလုပ်ရန်အတွက် ကြာမြင့်ချိန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ် အောင်လျော့ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။
* - about:configwindow ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.switch.threshold ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။value ကို 750000 ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။
* (၁၂)nglayout Initialpaint Delay
* မီးမြေခွေးနဲ့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတွေဖွင့်တိုင်းမှာ မိမိလိုအပ်တဲ့ စာမျက်နှာမရောက်မှီ အမှန်တစ်ကယ် မလိုအပ်တဲ့ ဒေတာတွေ အများအပြား ကိုပါ မီးမြေခွေးက ဒေါင်းလုဒ်ချ လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စောင့်ဆိုင်း ချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ထား နိုင်ပါတယ်။
* - about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Nglayout.initialpaint.delay ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။ Value ကို0ထားပါ။ Ok ပေးပါ။
Posted by Pai Khant at 5:17 AM No comments:
သင့်ရဲ့ USB drive, Memory stick, Thumb drive, MP3/MP4 player ထဲမှဖိုင်များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ တခြားမဆိုင်သူ မဖတ်စေချင်ရင်
ကဲ အသုံးပြုပုံလေး နဲနဲ ပြောကြရအောင်
http://portableapps.com/apps/utilities/toucan ကို သွားပြီး d0wnload လုပ်ပါ။
credit to http://kozaw357.multiply.com/journal/item/98/98
Posted by Pai Khant at 3:36 AM No comments:
မြန်မာဖောင့် ဒဒွေးရိုက်မရတဲ့ပြဿ နာ ဖြေရှင်းဖို...
ကျွန်တော့်ရဲ့ website directory လေးပါ
Firefox ရဲ့ download speed ကို မြှင့်တင်ကြည့်ရအောင်။ Firefox က default အနေနဲ့ dial-up speeds ကို ထားထားတာပါ ။ မိတ်ဆွေဟာ highspe...
ကွန်ပျူတာ မြန်ဆန်စေချင်ရင် ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် အတွက် အောက်ပါ နည်းလမ်း နှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပါ။ အတိုင်းအတာ တစ်...
“Windows ရဲ့ Performance ကိုမြှင့်သုံးတဲ့ နည်း”
“Windows ရဲ့ Performance ကိုမြှင့်သုံးတဲ့ နည်း” ကျွန်တော် လက်ရှိဆက်တင်လုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့ “Windows ရဲ့ Performance ကိုမြှင့်သုံးတဲ့ နည်း...
သင့်ရဲ့ USB drive, Memory stick, Thumb drive, MP3/MP4 player ထဲမှဖိုင်များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ တခြားမဆိုင်သူ မဖတ်စေချင်ရင် ...
ကွန်ပျူတာ ပိုမိုမြန်ဆန်စေသော နည်းလမ်းများ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရရှိလာသော အတွေးအကြုံလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ လူတု...
အင်တာနက် Upload Speed ကို ဒီလိုမြှင့်လိုက်ပါ ( For Windows7& 8 ) အင်တာနက်သုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံးကိစ္စတွေထဲမှာ အင်တ...
ကျွန်တော် BAT ဆိုတဲ့ ဂရုလေးထဲကနေ ရထားပါတယ်။ မန်ဘာတွေကိုလည်း သိစေချင်လို့ပါ.. သူက Bat ဖိုင်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ Wifi Hotspot လွှင့်တဲ့နည်း လေးပါ...
Recycler virus သတ်ဖို့ကုဒ်လေးတွေပါ အောက်ပါကုဒ်များအား notepad တွင်ကော်ပီကူးလိုက်ပါ save လျှင် All files နှင့် .bat extension နှင့် sa...